Mayelana NATHI - Guangdong Huayuemei Lighting Technology Co., Ltd.
Kungani i-Huayuemei Lighting
IGuangdong Huayuemei Lighting Technology Co, Ltd yasungulwa ngo-2006. IHuayuemei Lighting njengomkhiqizi we-Professional LED Light Strip, ngokukhethekile ekuklameni, ekukhiqizeni nasekusabalaliseni iminyaka engaphezu kwengu-10. Ngama-2,300 sqm wezindawo zokukhiqiza eGuangzhou, China.
Sinethuba elikhulu lokuklama nokukhiqiza isipiliyoni, i-workshop, izinsiza, iqembu lokuthengisa.
Isimiso: Ikhwalithi enhle nentengo yokuncintisana, inani elikhulu lamakhasimende.
Izinsizakalo ezinhle kakhulu zangemva kokuthengisa nesisombululo esihle kumakhasimende.
Umqondo womkhiqizo mkhulu umkhiqizo osebenza kakhulu, okhangayo, futhi obalulekile (i-LED Strip Light).
Futhi samukela ama-oda e-OEM wezidingo ezikhethekile zamakhasimende. Sizogcina njalo senza umkhiqizo omusha, sithuthukise ikhwalithi yomkhiqizo wethu futhi sithuthukise nezinsizakalo zethu.
Sineqembu eliqinile lokwenza i-oda lakho ngesikhathi esisebenzayo, ukulethwa kwamakhasimende ngesikhathi. Sineqophelo lokukhiqiza eliqinile kakhulu, qiniseka ukuthi wonke umkhiqizo wenziwe kahle kuzo zonke izixhumanisi zochungechunge lokukhiqiza.
IHuayuemei ingumhlinzeki okhokhelwayo we-LED Strip Light ikakhulukazi kufaka phakathi i-Backlight LED Strip Light, i-Edge-lit LED Module Bar, i-Flexible / Rigid LED Strip Light, i-Backlight LED Module, besisebenza ku-LED Lighting eChina iminyaka engaphezu kwengu-10. Sinezinketho ezenziwe ngezifiso ukusiza amaklayenti ukwengeza ukuthengiswa kwawo kweziteshi ezahlukahlukene.
Ithimba lethu lokuthengisa lilwela ukwanelisa amakhasimende ngezinsizakalo ezinhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngokususelwa ebudlelwaneni bethu obuseduze namakhasimende, sihlala singathola imininingwane yokuqala evela emakethe futhi singenziwa ngezifiso ngokwesicelo esikhethekile sekhasimende. Ukukhula okungaphezu kweminyaka eyi-10, sinolwazi ku-ODM naku-OEM. Ngomkhiqizo wethu we-premium kanye nensizakalo, sisungule ukubambisana okuhle kwebhizinisi namakhasimende ezimakethe zasekhaya nakwamanye amazwe bamukelekile ngokufudumele. Uma unesithakazelo kunoma yiziphi izinto zethu noma udinga olunye ulwazi, pls ungangabazi ukuxhumana nathi. Sibheke phambili ukubambisana nawe esikhathini esizayo esiseduze.
Ikhwalithi & Izitifiketi
Sakha ngaphakathi endlini ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu. Ukukhanya kwethu kwe-Strip LED yi-CE, Rosh ne-UL eqinisekisiwe.
Ukulula kuyinto mantra yethu. Izixazululo zethu kulula ukuzifaka, kulula ukuzikhipha futhi kulula ukuzilawula. Futhi sizokwenza ngokwesicelo sakho sokwenza isixazululo esingcono kakhulu kuwe.
I-Huayuemei Lighting iyimboni yezobuciko ethuthukile nenkampani yezohwebo yazo zonke izidingo zakho. Ubuciko buyasishayela futhi busikhuthaze.
Ithimba lethu le-R & D elingaphakathi licwaninga izitayela ezintsha futhi lithuthukise imikhiqizo emisha yomkhakha.
Singochwepheshe ekukhishweni okukhulu sibonga ama-2,300 sqm wethu wezindawo zokukhiqiza eGuangzhou, China.
Sizohlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme nezentengiso.
Ngaphezulu kweminyaka eyi-14 yesipiliyoni, sinamakhasimende emazweni angaphezu kwe-130 nakwamadolobha angaphezu kwe-4,500.